သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သမ္မတကြီးပွဲကြမ်းပြီ
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သမ္မတကြီးပွဲကြမ်းပြီ!!!! July 11, 2019 ပြည်တွင်းသတင်းသမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သမ္မတကြီးပွဲကြမ်းပြီ!!!!Wisdom Hill ကျောင်းကိုပါ အစိုးရက အရေးယူမယ်။မူကြို ပြန်ဖွင့်ခွင့်ရဖို့ မလွယ်တော့ဘူး၊ သူပိုင်တဲ့ တခြား မူ၊ လယ်၊ ထက် ကျောင်းတွေကိုလည်း ပြန်စိစစ်ဖို့ သမ္မတက ပညာရေး ဝန်ကြီးကို ညွှန်ကြားလိုက်ပြီ။
ကလေးအမှု ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ကျောင်းပိုင်ရှင်တွေကို BLack List လုပ်ဖို့ အစိုးရက စဉ်းစားနေတယ်။လုပ်ဖြစ်ရင် သူတို့သည် ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ခွင့် မရှိတော့ဘူး။ကလေးမူကြိုကျောင်း ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ဖွင့်နေတာကို မသိတဲ့ မသိချင်ရောင်ဆောင်နေတဲ့ နေပြည်တော်က လူမှုဝန်ထမ်း အရာရှိတွေကိုလည်း အရေးယူမယ်။
သမ္မတရုံး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှ